Coordinates: 35°18′S 149°8′E﻿ / ﻿35.300°S 149.133°E﻿ / -35.300; 149.133
Caasimada Kanbera y_note =
- jenera-barasaabl Peter Cosgrove
- Ra'iisul wasaare Malcolm Turnbull
- Taariikhda 1 Janaayo, 1901
- Total 7,617,930 km2 km²
- 2009 qiyaas 22,374,3702
- Per capita $22,550
Australia Melbourn magalloka
Ustareliya waa qaarad iyo wadan oo ku taalo Konnfurta fog, waxoo u dhaxeeyaa jasiiada Niyuusiilaand oo ka xigta woqooyi bari iyo Indonesia oo ka xigta koonfur. wadanka Australia waa wadan aad u ween, waxaana degen dad ajnaanib kala duwan.wadanka caasimadiisa waa Kanbera tiisa labaad waa Sidni. Australia waxay leedahay dhaqaalaha 13-ka adduunka ugu wayn iyo tobankii sano ee ugu sarreeya dakhliga qofka (IMF). Marka la eego heerka labaad ee horumarka bini'aadan ee adduunka, waddanku wuxuu si heer sare ah u yahay tayada nolosha, caafimaadka, waxbarashada, xorriyadda dhaqaalaha, xoriyada madaniga ah iyo xuquuqda siyaasadeed. Australia waa xubin ka mid ah habka ASEAN Plus Plus, Qaramada Midoobay, G20, Commonwealth Nations, ANZUS, Ururka Iskaashatada Dhaqaalaha iyo Horumarinta (OECD), Ururka Caalamiga ah ee Ganacsiga, Iskaashiga Dhaqaalaha Asia iyo Isku-dhafka, iyo Forum Pacific Islands Forum. Tirada dadka ku nool 25 milyan waa magaalo weyn oo aad u xooggan oo ku dhereray xeebta bariga. Australiya waxay leedahay 9-ka caalamiga ah ee soo galootiga ah ee ugu weyn dunida, iyadoo muhaajiriintu ay muhim u yihiin 26% dadweynaha.
Markii ugu horeysay ee Yurub ah ee la duubay ee Australiya, iyo dhulkii ugu horreeyey ee lagu duubo Yurub ee ku yaal qaarada Australiya (ee 1606), waxaa loo aqoonsaday Holland. Markabkii ugu horreeyay iyo shaqaalihii saarnaa markabka Australiya oo la kulmay dadka Aborijiniska ahaa Duyfken oo ahaa kabtanka Dutch, Willem Janszoon. Wuxuu arkay xeebta jasiiradda Cape York horaantii 1606, waxana uu dhulka dhigay 26kii Febraayo ee Pennefather River meel u dhow magaalada casipa ee Weipa ee Cape York. Holland wuxuu ku tusay dhamaan dhulka galbeedka iyo waqooyiga, waxaana loo yaqaan 'New Holland' inta lagu guda jiro qarnigii 17aad, laakiin ma uusan isku dayin degsiimo. William Dampier, oo ah sahamiye Ingiriis ah iyo mid gaar ah, ayaa ku soo degay xeebta waqooyi galbeed ee New Holland 1688kii iyo mar kale 1699 safar dib u laabasho ah. Sanadkii 1770-kii, James Cook wuxuu ka soo degay xeebta bari, kaas oo uu magaciisu ahaa New South Wales waxaana uu dalbaday Britain.
Australia waa wadan hodan ah; waxay dhalinaysaa dakhli ka yimid ilo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhoofinta dhirta la xidhiidha, isgaarsiinta, bangiga iyo wax soo saarka. Waxay leedahay dhaqaalaha suuqyada, korodhka sicirka ee qofkiiba, iyo heerka saboolnimada ee hooseeya. Marka la eego celceliska hantida, Australia ayaa kaalinta labaad kaga jirta kaalinta labaad ee adduunka ka dib markii Switzerland ay ahayd 2013, inkastoo heerarka saboolnimada qaranka uu kordhay 10.2% ilaa 11.8%, laga bilaabo 2000/01 illaa 2013. Waxaa loo aqoonsaday Machadka Cilmi-baarista Credit Suisse oo ah qaranka oo leh hantida dhexdhexaadka ah ee adduunka ugu sareeya iyo tan labaad ee ugu sareysa ee hantida ee qaan-gaar ah ee dadka waawayn sanadka 2013. Template:Administrative divisions of Australia
3 Kof degaan Australia
4 sido kale fiiri
Kof degaan AustraliaEdit
Australia 18 000 000 +
China 600 000+
South Africa 200,000+
United States 250,000+
Arab League 170,000+
South Korea 110 000+
Vietnam 111 000 +
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Australia&oldid=230315"
Last edited on 5 Febraayo 2022, at 15:33
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 5 Febraayo 2022, marka ee eheed 15:33.